Ama-Cannabis Pitch Decks - Ama-Decks Wokwezifiso Wokukhulisa Imali
Thola i-Cannabis Pitch Deck yakho
Gxila ebhizinisini lakho emakhasini ayi-15 kuphela bese wakha uhlaka lokuthi uzokwenzani ngemali yakho enkulu ekukhuliseni insangu yakho.
Joyina ochwepheshe ababili be-cannabis njengoba bebuyekeza ama-pitch deck kusuka kuma-MSOs futhi bakusize ukuthi udilize okwakho ungene emphemeni ongawusebenzisa kulokho ozama ukukwenza.
Iphakheji ye-Cannabis Pitch Deck ifaka phakathi:
I-15 slide pitch emphemeni
Incazelo ephelele yesilayidi ngasinye
Idalwe ngabachwepheshe bezihloko zezomthetho nezezezimali embonini ye-cannabis.
Qedela & ngokwezifiso ikhabethe lepaki
Amahora wokuqukethwe achaza ukuthi ungawenza kanjani ngokwezifiso umugqa wepaki weqembu lakho
3 amahora we KaJosh Kincaid isikhathi
3 amahora we UTom Howard isikhathi
Umpheme wepali owenziwe ngokwezifiso weThimba lakho emasontweni ambalwa.
Okwengeziwe $ 99, singanikeza futhi ngomklamo we-logo yangokwezifiso. Uma usuqedile ngalokhu - ngeke ube nedokodo lakho kuphela - kodwa futhi uzoqonda nokuthi yini abatshalizimali abayifunayo, yiziphi izindleko nezingibe ezingase zikwehlele, futhi okubaluleke kakhulu ukuthi uzoyithola kanjani imali yakho.
Ilogo Design for Pitch Deck ubuningi
I-Cannabis Capital Analyst
UJosh Kincaid usebenze kwezezimali iminyaka eminingi ngaphambi kokuphendukela kuphela embonini yensangu.
Ukuhamba Kwe-Cannabis Pitch Deck Workflow yakho
Ochwepheshe Bezindaba Eziyinhloko embonini ye-cannabis ukukuqondisa ekubuyekezeni ama-MSO deck
Enza ngendlela oyifisayo isilayidi ngasinye sedokodo leqembu lakho
UTom & Josh hlala phansi nethimba lakho munye ngamunye ukuthuthukisa indawo.
Uthola u- $ 250 kweminye imikhiqizo yomkhakha we-cannabis, njengephakheji yethu ye-Business Plan Services, noma i-Fundraising Suite yethu.
Buyekeza ama-Real Decks
Siqala ngokubuyekeza, futhi sihlinzeke ngokubuyekezwa kwakho, ama-pitch decks wangempela avela kuma-MSO afana neMedMen, Harvest, Trulive, Acerage, nokuningi.
Uzongena ngokujulile ekutheni opharetha bamanje bafuna kanjani imali.
Hlangana Nezakhi Zofuzo Zasendaweni (LoGen)
Izakhi zofuzo Zendawo noma i-LoGen ngamafuphi ukuqalwa kwama-cannabis okucatshangwayo okuhlanganisiwe. Kuzwakala kujwayelekile?
Isiqalo Pitch Deck akuyona into wonke umuntu afuna ukuyenza, kepha nama-MSOs kufanele aqhubeke nokuqongelela imali ukuze athole leyo layisense elandelayo - noma ayakhe ngemuva kokuyithola.
Chaza Ithuba Lakho Lemakethe
Usebenzaphi sikusiza ukuthi udlule embusweni wakho kanye nemithetho yawo nokuthi iyini imakethe engahambisani nayo ngokusebenzisa imibhalo ehola phambili yezimboni evela kwi-Marijuana Business Daily.
Chaza Ithimba Lakho
Iqembu Lithola Igolide - onobani ebhentshini lakho yilokho okukufaka kwezinye. osomathuba abangabodwa nabakhawulelwe emakethe.
Ubani owaziyo ukuthi ubalulekile - insangu imboni ebiza kakhulu noma izimakethe zivulekile kubanikazi bamalayisense abasha.
I-Cannabis Pitch Deck Workflow
Ama-pitch decks asetshenziswa ngokuhlanganyela necebo lebhizinisi nokuqagela kwezezimali.
Ngenxa yalokhu, iphimbo kufanele likhawulelwe kulwazi olubaluleke kakhulu kuma-slides ayi-10-15 - isethulo semizuzu eyi-10, imizuzu engama-20 e-MOST.
Izingxenye ezilandelayo kufanele zicatshangelwe (isilayidi esisodwa ngasinye):
Thula ilogo yakho, igama lenkampani
Faka amagama wabethuli, izihloko zomsebenzi nolwazi lokuxhumana
Faka isithombe somkhiqizo wakho noma ukunikezwa kwensizakalo (uma unayo)
Chaza inkinga obheke ukuyilungisa ngamagama alula, acacile
Chaza ukuthi kungani umkhiqizo wakho wenza inkinga yekhasimende isuke. Sebenzisa izibonelo.
Isimo samanje, ubucayi benkinga
Isimo sesikhathi esizayo esifiselekayo, inzuzo kumakhasimende
Isikali semakethe yokuqala
Mangaki amakhasimende angaba khona aqinisekise le nkinga?
Isixazululo seqembu lakho
Chaza ikhambi lakho ngamagama alula, acacile, amafushane
Izinzuzo ezisemqoka, izici zamakhasimende
Isifanekiso sokwakhiwa komkhiqizo
Umugqa wesikhathi wokuthuthukisa noma wokuklama
Qaphela ukuthi lokhu akufanele kube ubuchwepheshe "bemilingo" noma yini engekho emthethweni
Yini amakhasimende azoyikhokhela ikhambi?
Chaza ngokusobala nangokufishane ukuthi uzoyenza kanjani imali
Khomba izinhloso zohlelo lwebhizinisi lapha, uma ungakakwenzi, kufaka phakathi:
Yini inani kumakhasimende?
Khumbula, umtshalizimali ufuna ukwazi ukuthi uyaqonda ukuthi konke kumayelana nekhasimende!
Udinga ukukhombisa ukuthi imakethe ehlosiwe inkulu ngokwanele ukuze uqhubeke nebhizinisi elinenzuzo, ngenkathi ugcizelela ukubaluleka kwesisombululo sakho.
Yini ubukhulu bezimakethe kanye namandla okukhula okulindelekile?
Ubani umthengi wakho ohlosiwe?
Yini ukuma komkhiqizo wakho ngaphakathi kwemakethe?
Zikhona yini izitayela zemakethe oyisebenzisayo? Le mpendulo ithi “Kungani Manje?”
Yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingaba khona zemikhiqizo yakho?
Uzobafinyelela kanjani abathengi bakho?
Xoxa ngamasu wokumaketha 1 noma 2
Uhlala isikhathi esingakanani umjikelezo wokuthengisa necebo lemakethe yokuqala?
Uzolithola kanjani ikhasimende lakho lokuqala?
Ingabe banayo imali yokusebenzisa?
Imodeli Yezindleko Nentengo (Izimali Eziyisisekelo)
Uzowuthuthukisa kanjani umkhiqizo / insiza?
Izindleko zokuthuthukisa nokukhiqiza
Intengo yokuthengisa engaba khona kumakhasimende akho
Ukuhlaziywa kwamanani okuncintisana
Izindleko / Ukubalwa kweMargin
Konke ukuqala kunomncintiswano, hhayi ukufakwa ohlwini lwabancintisana kuyifulegi elibomvu.
Kukhona NJALO ukuncintisana
Uma ingekho, mhlawumbe ayikho imakethe
Ngubani osemakethe futhi ubaqhathanisa kanjani nabo?
Uyini umehluko kumkhiqizo, izici, namanani entengo
Nikeza ngokuhlaziywa kokuncintisana
Kungaba itafula / ishadi eliqhathanisa isixazululo sakho kule ndlela yamanje kanye nabancintisana nabo abakhulu
Ukuqhathanisa kusekelwe ezinzuzweni ezibalulekile
Qaphela ukuthi lapho ubhekane namaqiniso ngokwengeziwe, icala lakho likholwa ngokwengeziwe
Bhala wonke amalungu eqembu
Yimaphi amakhono we-UNIQUE, izinsizakusebenza, isipiliyoni, noma ulwazi abaletha eqenjini?
Faka abasunguli, abaphathi abakhulu kanye neBhodi Labeluleki
Kungani uyiqembu elifanele ukuwina (irekhodi lempumelelo)?
Faka ukubambisana kanye nabahlinzeki bezinsizakalo abaqeqeshiwe njengabameli, ama-CPAs, nokuningi.
Uqasha ziphi izikhundla?
Abatshalizimali abaningi bayazi ukuthi babheja ku-jockey (ithimba), hhayi ihhashi (umbono webhizinisi) ngakho-ke yenza le slide ibe nomthelela
Akuwona wonke amabhizinisi anomthelela kwezenhlalo, kepha kungasiza ukuletha eyodwa uma unayo. Izifundazwe eziningi zinengxenye "yokulingana kwezenhlalo" futhi kufanele ubhekane nayo ku-pitch yakho. Ngokwengeziwe, sihlala sisho ku-Cannabis Legalization News naku-Talking Hedge - hlola womabili ama-podcast - ukuthi "yonke insangu ingeyasendaweni" ngakho-ke ukuba nenzuzo emphakathini wakho kufanele kube yingxenye yohlelo lwakho.
Ingabe unethimba elihlukahlukene nelibandakanya wonke umuntu?
Uyini umthelela womkhiqizo noma wensizakalo yakho emvelweni?
Ngabe ibhizinisi lakho lizoba nomthelela omuhle emphakathini?
Chaza amanani enkampani yakho
Ngabe lokhu kuzoba wuguquko olukhulu lokuhle emakethe?
Inzuzo Yokuncintisana noma I-Sauce Yemfihlo
Yimuphi umnikazi wokuthengisa, oyisisekelo onikeza isisombululo seqembu lakho ithuba elicacile nelivikelekayo?
Thuthukisa ukwakheka kunokunikezwa kwamanje
Yini ozoyenza kahle kakhulu okuzoba nzima ukuyikopisha?
Unawo amalungelo obunikazi?
Bopha isethulo ube mnandi futhi ucoceke
Yiziphi izinyathelo ezilandelayo njengenkampani?
Yiluphi ulwazi oludingayo ukuze uqhubekele phambili?
Yilungele eminye imibuzo
Khumbula ukufaka ukubizela esenzweni
Thatha i-Cannabiz yakho uye ezingeni elilandelayo
Imephu Yezomthetho Yensangu
Ungaphuthelwa yibalazwe lethu le-Marijuana Legalisation lapho ungapheqa khona isimo samanje semithetho kuzo zonke izifundazwe e-United States bese ubona konke okuthunyelwe kukho ngakunye.